အင်တာဗျူးဖြေအပြီးမှာ အလုပ်ရှင်ကို မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းကြီး (၅) ခု - For her Myanmar
အလုပ်ရှင်ရဲ့အထင်တကြီး စိတ်ဝင်စားမှုကို ရဖို့ ဒီလိုမေးခွန်းတွေ မေးတတ်ဖို့ လိုမယ်နော်..
ယောင်းတို့ရေ … အလုပ်လျှောက်တိုင်းမှာ အလုပ်ရှင်ဘက် ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် အင်တာဗျူးခေါ်တာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်တာဗျူးဆိုတာ သူမေးတာတွေဖြေလိုက်ရုံနဲ့လည်း မပြီးသေးဘူး ယောင်းရဲ့။ အလုပ်ရှင်ကိုလည်း ကိုယ်သိဖို့လိုအပ်တာတွေ မေးခွန်းပြန်ထုတ်တတ်ဦးမှ။ ဒီတော့ အင်တာဗျူးအပြီးမှာ အလုပ်ရှင်ကို ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေ မေးသင့်လဲဆိုတော့ …
(၁) ဒီအလုပ်ရဲ့ တာဝန်တွေက ဘာတွေလဲ ?
ဒါက ယောင်းအတွက် ဒီအလုပ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ တကယ်ကောအပ်စပ်ရဲ့လားဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။ တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့လုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန်တွေကို နားလည်ထားတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေ၊ အမြင်သစ်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်တာပေါ့။
(၂) ကုမ္ပဏီရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ ? ဒီမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်လာဖို့ ဝန်ထမ်းဆီက ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ မျှော်လင့်သလဲ ?
ဒီမေးခွန်းက ဒီအလုပ်ကို ယောင်းအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားကြောင်း အလုပ်ရှင်ကို သတိထားမိစေပါတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်ရှင်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကိုသိထားတော့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ ကိုယ်ကြိုးစားသလောက် အရာမထင်တာမျိုးတွေ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
(၃) ဒီကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ရင် ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ဖို့ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရှိလဲ ?
ကိုယ့်ဘက်က အချိန်နဲ့လူအင်အားစိုက်ထုတ်ရတဲ့အတူတော့ လုပ်ငန်းခွင်ကနေ သင်ယူစရာတွေလည်းရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံတိုးစေဖို့ ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရှိနိုင်လဲဆိုတာ တစ်ခါတည်းသိအောင်မေးထားပါ။
(၄) ကိုယ်အလုပ်လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ
ရုံးမှာ ကိုယ်နဲ့တူတူအလုပ်တွဲလုပ်ရမယ့်လူတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးသေးတာဆိုတော့ ကိုယ် ဘယ်သူတွေနဲ့ တွဲလုပ်ရမယ်၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဘယ်လို အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာ အရိပ်အမြွက်လောက်သိထားတာက ယောင်းကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့်အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်း ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
(၅) ကိုယ်ရင်ဆိုင်ရလောက်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေက ဘာတွေဖြစ်လောက်မလဲ?
အကောင်းတွေချည်းပဲ သိထားလို့မရပါဘူးနော်။ ဒီအလုပ်မှာ ဖြစ်လိုက်နိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ကိုယ်ကြုံတွေ့ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကြိုသိထားမှသာ အရေးဟယ်အကြောင်းဟယ်ဆို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ချက်ကျလက်ကျဖြေရှင်းနိုင်မှာပေါ့… ဒီမေးခွန်းကလည်း ယောင်းအပေါ် အလုပ်ရှင်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို တိုးသွားစေပါတယ်။
ကဲ … ဒါတွေကတော့ အင်တာဗျူးအပြီးမှာ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်သူကို မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေပါပဲ။ ရိုင်းသလိုလည်းမဖြစ်ဘဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချက်တွေကို သိနိုင်တာမို့ ယောင်းတို့အတွက် အကူအညီဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
References : The balance career, Big Interview, Glass door
အလုပျရှငျရဲ့အထငျကွီးခွငျးခံရဖို့ ဒီလိုမေးခှနျးတှေ မေးတတျဖို့လိုမယျ
ယောငျးတို့ရေ … အလုပျလြှောကျတိုငျးမှာ အလုပျရှငျဘကျ ကိုယျ့ရဲ့အရညျအခငျြးတှကေို သဘောကတြယျဆိုရငျ အငျတာဗြူးချေါတာ သိကွမယျထငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အငျတာဗြူးဆိုတာ သူမေးတာတှဖွေလေိုကျရုံနဲ့လညျး မပွီးသေးဘူး ယောငျးရဲ့။ အလုပျရှငျကိုလညျး ကိုယျသိဖို့လိုအပျတာတှေ မေးခှနျးပွနျထုတျတတျဦးမှ။ ဒီတော့ အငျတာဗြူးအပွီးမှာ အလုပျရှငျကို ဘယျလိုမေးခှနျးတှေ မေးသငျ့လဲဆိုတော့ …
(၁) ဒီအလုပျရဲ့ တာဝနျတှကေ ဘာတှလေဲ ?
ဒါက ယောငျးအတှကျ ဒီအလုပျနဲ့ကိုယျနဲ့ တကယျကောအပျစပျရဲ့လားဆိုတာ သိနိုငျတဲ့အခှငျ့အရေးတဈခုပါပဲ။ တဈနနေဲ့တဈနလေု့ပျဆောငျရမယျ့ တာဝနျတှကေို နားလညျထားတဲ့အခါ လိုအပျတဲ့အရညျအခငျြးတှေ၊ အမွငျသဈတှကေို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိနိုငျတာပေါ့။
(၂) ကုမ်ပဏီရဲ့မြှျောမှနျးခကျြတှကေ ဘာတှလေဲ ? ဒီမြှျောမှနျးခကျြအတိုငျးဖွဈလာဖို့ ဝနျထမျးဆီက ဘယျလိုအရညျအခငျြးတှေ မြှျောလငျ့သလဲ ?
ဒီမေးခှနျးက ဒီအလုပျကို ယောငျးအမှနျတကယျစိတျဝငျစားကွောငျး အလုပျရှငျကို သတိထားမိစပေါတယျ။ ပွီးတော့ အလုပျရှငျရဲ့ ပနျးတိုငျကိုသိထားတော့ အလုပျလုပျရတဲ့အခါ ကိုယျကွိုးစားသလောကျ အရာမထငျတာမြိုးတှေ မဖွဈတော့ဘူးပေါ့။
(၃) ဒီကုမ်ပဏီမှာ အလုပျလုပျရငျ ကိုယျ့ဘဝတိုးတကျဖို့ ဘယျလိုအခှငျ့အရေးတှရှေိလဲ ?
ကိုယျ့ဘကျက အခြိနျနဲ့လူအငျအားစိုကျထုတျရတဲ့အတူတော့ လုပျငနျးခှငျကနေ သငျယူစရာတှလေညျးရှိဖို့လိုတာပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကို လုပျငနျးခှငျအတှအေ့ကွုံတိုးစဖေို့ ရှလြေှ့ောကျဘယျလိုအခှငျ့အရေးတှရှေိနိုငျလဲဆိုတာ တဈခါတညျးသိအောငျမေးထားပါ။
(၄) ကိုယျအလုပျလုပျရမယျ့ လုပျငနျးခှငျအခွအေနေ
ရုံးမှာ ကိုယျနဲ့တူတူအလုပျတှဲလုပျရမယျ့လူတှနေဲ့ အဆငျပွအေောငျ နတေတျထိုငျတတျဖို့ကလညျး အရေးကွီးသေးတာဆိုတော့ ကိုယျ ဘယျသူတှနေဲ့ တှဲလုပျရမယျ၊ လုပျငနျးခှငျထဲမှာ ဘယျလို အခွအေနရှေိတယျဆိုတာ အရိပျအမွှကျလောကျသိထားတာက ယောငျးကို အထောကျအကူ ဖွဈစမေယျ့အပွငျ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျဝငျစားမှုကိုလညျး ပျေါလှငျစပေါတယျ။
(၅) ကိုယျရငျဆိုငျရလောကျတဲ့ စိနျချေါမှုတှကေ ဘာတှဖွေဈလောကျမလဲ?
အကောငျးတှခေညျြးပဲ သိထားလို့မရပါဘူးနျော။ ဒီအလုပျမှာ ဖွဈလိုကျနိုငျတဲ့ ပွဿနာတှေ၊ ကိုယျကွုံတှရေ့မယျ့ စိနျချေါမှုတှကေို ကွိုသိထားမှသာ အရေးဟယျအကွောငျးဟယျဆို မွနျမွနျဆနျဆနျ ခကျြကလြကျကဖြွရှေငျးနိုငျမှာပေါ့… ဒီမေးခှနျးကလညျး ယောငျးအပျေါ အလုပျရှငျရဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို တိုးသှားစပေါတယျ။
ကဲ … ဒါတှကေတော့ အငျတာဗြူးအပွီးမှာ ကိုယျ့ရဲ့အလုပျရှငျဖွဈလာနိုငျသူကို မေးသငျ့တဲ့မေးခှနျးလေးတှပေါပဲ။ ရိုငျးသလိုလညျးမဖွဈဘဲ ကိုယျလိုခငျြတဲ့အခကျြတှကေို သိနိုငျတာမို့ ယောငျးတို့အတှကျ အကူအညီဖွဈမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျနျော။
Tags: Career, Company, Interview, Job, Office, question, work